थाहा खबर: माओवादीसँगको तालमेल सबैले स्वीकारेका छन् : कांग्रेस उम्मेदवार पार्वती शाह
माओवादीसँगको तालमेल सबैले स्वीकारेका छन् : कांग्रेस उम्मेदवार पार्वती शाह
फरक सिद्धान्त बोकेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेलबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकाको उपप्रमुखकी उम्मेदवार छिन्, महिला संघ चितवनकी अध्यक्ष पार्वती शाह। अहिले उनी चुनावी प्रचारमा संयुक्त कार्यक्रमका साथ प्रमुखकी उम्मेदवार माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रेणु दाहालसँगै छिन्। २०३३ सालबाट विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकी शाहसँग थाहाखबरका लागि नारायण ढुंगानाले गरेको कुराकानी :
कस्तो लागिरहेको छ माओवादीसँगको तालमेल?
कुनै बेला दुई ध्रुवमा हिँडेका हामीसँगै एकै मञ्चमा एकै स्वरमा जनताको माझमा उभिन्छौं जस्तो कहिल्यै सोचेको थिइनँ। कल्पनाभन्दा बाहिरकै कुरा भयो। पार्टीको निर्णय हो, निर्देशन हो। पार्टीका सिपाही हामी पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ, स्वीकार्नु पर्छ। हामीले स्वीकारेका छौं। भोट माग्नसँगै हिँडेका छौं।
पार्टीको निर्णय स्वीकार्न कठिन भएको हो?
२१ गते बिहान १० बजे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौं। त्यसलगत्तै माओवादीसँग तालमेलको निर्णय सुनियो। जुन रफ्तारमा मेयरका उम्मेदवार कांग्रेसका युवा नेता आदरणीय दिनेश कोइराला र म हिँडेका थियौं, जनतामा ठूलो उत्साह आएको थियो । उहाँहरूको उत्साहले हामीमा ऊर्जा बढिरहेको थियो। त्यस्तो निर्णय आउँदा सुरुमा त म चकित परेँ। के गर्ने के नगर्ने, कांग्रेसीजनमा पनि अन्योल छायो। पछि थाहा पाइयो, तालमेल पोखरा, काठमाडौंलगायतका जिल्लामा पनि भएको रहेछ। पछि राम्रै भएको छ।
कांग्रेस कार्यकर्ताले अझै स्वीकार्न सकेका छैनन् नि!
तालमेलको यो निर्णयले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको मन अवश्य दुःखेको छ। स्व. गिरिजाबाबुले माओवादीलाई शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुभयो। कांग्रेस भनेको विशाल हृदय भएकोे पार्टी हो, आफू हारेर पनि देश बचाउन सक्ने पार्टी हो। कांग्रेस आफूले नपाएर पनि अरुलाई दिन सक्ने, अरुको मन मिलाएर लान सक्ने पार्टी हो। शुरुमा केही समस्या भयो तर अहिले छैन। चुनावी प्रचारप्रसार तीब्र भइरहेको छ।
यसले नतिजालाई असर पार्छ कि पार्दैन त?
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जसरी पछिल्लो समयमा संविधान जनतालाई दिलायो, यो सत्ता समीकरणले २० वर्षमा हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्दै सिंहदरबारका अधिकारलाई जनताको घरघरमा पुर्‍याउने अभियानमा कांग्रेस लागेको हो। कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर भए पनि जनतालाई अधिकार दिलाउन खोजेको छ। मलाई विश्वास छ, यो तालमेलको निर्णय पनि स्वीकार्नु भएकै छ। अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज कांग्रेसमा निराशा कम हुँदै गएको छ। उत्साह थपिँदै छ। कार्यकर्ताले पनि ‘परिस्थतिअनुकुल कांग्रेस हिँड्छ’ भनेर ऊर्जा भरिरहेका छन्।
चुनावी अभियान कसरी चलिरहेको छ?
दुवै मेयर र उपमेयर सँगै जनताको माझ गइरहेका छौं। दुवै पार्टीले संयुक्त चुनावी अभियान तय गरेका छौं। संयुक्त उपस्थितिमा धेरै कार्यक्रम भैरहेका छन्। तालमेल भएपछि सबै कुरा तालमेल नै गर्नुपर्‍यो नि!
प्रमुख, उपप्रमुख दुवै महिला हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई नै मतदान गर्न कसरी विश्वास दिलाउनुभएको छ?
स्थानीय समस्या समाधान गर्ने निकाय हो अहिलेको जनप्रतिनिधि। केन्द्रमा जस्तै स्थानीय सरकार पनि मिलेरै चलाउँछौं भन्ने सन्देश लिएर भोट माग्दैछौं। हामी दुवै उम्मेदवार युवा पनि हौं। विगतका हाम्रो अनुभव कार्यशैलीले पनि जनताको मन जित्न सक्छाौं भन्ने लाग्छ। हामी दुवै महिलाले जित्यौं भने विकास निर्माणले अवश्य गति लिने छ। महिलाले अवसर पाए भने इमान्दारीपूर्वक कार्य गरेको उदाहरण समाजमा छ।
चुनौती छैन त तपाईंलाई जित्न?
चुनौती त हरेक कार्यमा हुन्छ, प्रत्येक अभियानमा हुन्छ, त्यसलाई सामना गर्दै चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने कुरा मनन गरेकी छु। चुनौतीको साथसाथै अवसर पनि हाम्रो लागि धेरै नै छ।
चुनाव जित्ने आधारहरू के हुन्?
पश्चिम चितवन कांग्रेसको गढ हो। कांग्रेसको घोषणापत्रमार्फत विगतमा कांग्रेसले गरेका विकास निमार्णका कार्यहरूको कारण चुनाव जित्न सहज छ। म पनि सामाजिक रूपमा जनताबीच परिचित महिला हुँ। म बाल्यकालदेखि नै सबै कुरा त्यागेर राजनीतिमा लागेकी हुँ। त्यसपछि नेविसंघ हुँदै नेपाल तरुण दलमा जिल्ला तह र केन्द्रीय सचिव भएर काम गरेको अनुभव छ। नेपाल महिला संघ चितवनको अध्यक्ष भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। प्रशस्तै आधार छन्।
कांग्रेस–माओवादीको समीकरण सफल होला त?
चुनाव सजिलै जित्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ। प्रमुखकी उम्मेदवार रेणु दाहाल र मेरो मात्र कुरा होइन, सहकार्य र मेलमिलापको पनि कुरा हो यो। मुलुकको निकासका लागि पनि यो समीकरण आवश्यक थियो।
भरतपुर महानगरपालिकामा चुनाव जित्ने हाम्रो बलियो संगठन छँदै थियो, तालमेलको समीकरणले त्यसमा बल पुर्‍याएको छ। त्यसैले हामीले चुनाव जितिसकेका छौं, मात्रै नतिजाका लागि निर्वाच प्रक्रिया पूरा गर्नुछ।